Gabriel García Márquez nemitsara yake gumi nematatu kuti vararame | Zvazvino Zvinyorwa
Gabriel García Márquez: gumi nematanhatu kurarama
Nhasi tinokuunzira imwe yezvinyorwa zvinyorwa izvo zvinotiyeuchidza nezvemunyori anodikanwa uye anodikanwa wechiLatin America munyori: Gabriel García Márquez, aka "Gabo." Makore mashoma apfuura akationekana nesu asi ndangariro dzake dzichiripo kwazvo, kunyanya muvaverengi vanofarira akawanda emabasa ake.
Pachiitiko ichi, tinokuunzira mukurumbira wavo «13 mitsara yekugara». Kunge chero zvese zvakabuda mumuromo weColombia kana peni, iyi mitsara inomiririra kudzidza kwese kwehupenyu netariro, mitsara yakanaka iyo isu tine chokwadi chekuti inosvika pamwoyo wako. Kana iwe uchiziva ivo, zvingave zvakanaka kwazvo kana iwe ukaverengera ivo, imwe yekuwedzera muyero wemufaro uye rudo hautombokuvadza. Kana ino iri nguva yako yekutanga kuaverenga, nyora pasi mukabhuku uye ugare uinazvo newe… Hauzomboziva kuti uchazvida riini.
Handikude kwete nekuda kwezvauri, asi nezvandiri kana ndiinemi.
Hapana munhu anokodzera misodzi yako, uye chero akafanirwa haazoite kuti iwe ucheme.
Kungoti nekuti mumwe munhu haakude nenzira yaunoda, hazvireve kuti haakudi nehupenyu hwavo hwese.
Shamwari yechokwadi ndiyo iyo inobata ruoko rwako uye inobata moyo wako.
Nzira yakaipa yekupotsa mumwe munhu ndeyekugara padhuze navo uye uchiziva kuti haungambova navo.
Usamborega kunyemwerera, kunyangwe kana uchinge wakasuruvara, nekuti hauzive kuti ndiani anogona kudanana nekunyemwerera kwako.
Unogona chete kuva munhu wepanyika, asi kune mumwe munhu iwe uri nyika.
Usapedze nguva nemunhu asingade kuishandisa newe.
Pamwe Mwari anoda kuti iwe usangane nevanhu vazhinji vasina kunaka usati wasangana nemunhu chaiye, kuitira kuti paunopedzisira wasangana navo iwe unozoziva nzira yekutenda.
Usacheme nekuti zvapera, kunyemwerera nekuti zvakaitika.
Pachagara paine vanhu vanokurwadzisa, saka iwe zvaunofanirwa kuita kuramba uchivimba uye kungo chenjera waunovimba naye kaviri.
Iva munhu ari nani uye ita shuwa kuti iwe uzive zvauri usati wasangana nemumwe munhu uye uchitarisira kuti munhu iyeye azive zvauri.
Usaedze zvakanyanya, zvinhu zvakanakisa zvinoitika kana iwe usingatarisiri ivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Gabriel García Márquez: gumi nematanhatu kurarama
Rosa Maria Castro Medellin. akadaro
Ndinoyemura uyu munyori mukuru GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, nekuda kwemabasa ake akaisvonaka. Musangano uyu: GUMI RIMWE GORE REKUSOLITUDE pakati pevamwe vazhinji.
Pindura kuna Rosa María Castro Medellín.
Alba Adriana Nassiz akadaro
Ndinoda kuziva kuti «mitsara gumi nematatu yekurarama» ndeyaGabriel García Marquez. Ndakaverenga makomendi akati wandei anovimbisa kuti haisi yake, kuti haisiyo maitiro ake. Ndingafarire mhinduro. Pachokwadi.
Pindura kuna Alba Adriana Nassiz
Aka ndekekutanga kutaura ... ndinoda kuziva kuti «mitsara gumi nematatu yekurarama» ndeyaGabriel García Marquez. Ndakaverenga makomendi akati wandei anovimbisa kuti haisi yake, kuti haisiyo maitiro ake. Ndingafarire mhinduro. Pachokwadi.
Ronny Ceciliano Valverde akadaro
Ichi chinhu chinopenya mwenje panzira yehupenyu…. neicho iwe chaunogona kurarama zvirinani uye kurarama zviri nani ...
Pindura Ronny Ceciliano Valverde
Juan José Millás anoburitsa bhuku idzva